Eyokuqala KwabaseKorinte 14:1-40
Izipho zokuprofetha nokukhuluma ngezilimi (1-25)
Imihlangano yobuKristu ehlelekile (26-40)
Indawo yabesifazane ebandleni (34, 35)
14 Phishekelani uthando, nokho niqhubeke nilwela ukuthola* iziphiwo ezingokomoya, kodwa okungcono ukuba niprofethe. + 2 Ngoba okhuluma ngolunye ulimi akakhulumi nabantu, kodwa ukhuluma noNkulunkulu, ngoba akekho olalelayo, + kodwa ukhuluma izimfihlo ezingcwele + ngomoya. 3 Nokho, lowo oprofethayo wakha, akhuthaze futhi aduduze abantu ngenkulumo yakhe. 4 Lowo okhuluma ngolunye ulimi uzakha yena, kodwa lowo oprofethayo wakha ibandla. 5 Manje ngingathanda ukuba nonke nikhulume ngezilimi, + kodwa ngikhetha ukuba niprofethe. + Ngempela, oprofethayo mkhulu kunalowo okhuluma ngezilimi, ngaphandle-ke uma etolika,* ukuze ibandla lakheke. 6 Kodwa ngalesi sikhathi bazalwane, uma ngingeza kini ngikhuluma ngezinye izilimi, buhle buni engiyobe nginenzela bona ngaphandle uma ngikhuluma kini ngesambulo + noma ngolwazi + noma ngesiprofetho noma ngemfundiso? 7 Kungokufanayo nangezinto ezingaphili ezikhipha umsindo, kungaba umtshingo noma ihabhu. Ngaphandle kokuba kube nezikhawu emisindweni, kuzokwaziwa kanjani lokho okudlalwa ngomtshingo noma ngehabhu? 8 Ngoba uma icilongo likhipha umsindo ongaqondakali, ubani oyolungela ukulwa? 9 Ngendlela efanayo, ngaphandle kokuba nikhulume inkulumo eqondakala kalula, umuntu uyokwazi kanjani lokho okukhulunywayo? Eqinisweni, niyobe nikhuluma emoyeni. 10 Kungenzeka ukuthi kukhona izilimi eziningi ezikhulunywa emhlabeni, kodwa noma kunjalo alukho olungenayo incazelo. 11 Ngoba uma ngingaluqondi ulimi, ngiyoba owesinye isizwe kulowo okhulumayo, nalowo okhulumayo uyoba owesinye isizwe kimi. 12 Kungokufanayo nangani, njengoba nizifisa ngentshiseko iziphiwo zomoya, funani ukuba nibe nezipho eziningi ezizokwakha ibandla. + 13 Ngakho-ke okhuluma ngolunye ulimi makathandazele ukuba atolike. *+ 14 Ngoba uma ngithandaza ngolunye ulimi, yisiphiwo sami somoya esithandazayo, kodwa ingqondo yami ayiqondi. 15 Khona-ke yini ezokwenziwa? Ngizothandaza ngesiphiwo somoya, kodwa ngizothandaza nangengqondo yami futhi. Ngizohlabelela ingoma yokudumisa ngesiphiwo somoya, kodwa ngizohlabelela ingoma yokudumisa nangengqondo yami futhi. 16 Uma kungenjalo, uma udumisa ngesiphiwo somoya, umuntu ovamile ophakathi kwenu uzosho kanjani ukuthi “Amen” ekubongeni kwakho, njengoba engakwazi lokho okushoyo? 17 Yiqiniso, ubonga ngendlela enhle, kodwa lona omunye umuntu akakhiwa. 18 Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi mina ngikhuluma ngezilimi eziningi kunani nonke. 19 Noma kunjalo, ebandleni ngingamane ngikhulume amazwi amahlanu ngengqondo yami,* ukuze ngifundise abanye,* esikhundleni samazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngolunye ulimi. + 20 Bazalwane, ningabi abantwana endleleni eniqonda ngayo, + kodwa yibani izingane ngokuqondene nobubi; + nibe abakhule ngokugcwele endleleni eniqonda ngayo. + 21 EMthethweni kulotshiwe: “ ‘Ngizokhuluma nalesi sizwe ngezilimi zezinye izizwe nangezindebe zezihambi, kodwa ngisho nangaleso sikhathi ngeke singilalele,’ kusho uJehova.” *+ 22 Ngakho ukukhuluma ngezilimi okokwenza abangakholwa bakholwe, hhayi ukufundisa amakholwa, + kanti isiprofetho akusona esabangewona amakholwa, kodwa esamakholwa. 23 Ngakho uma lonke ibandla lihlangana ndawonye endaweni eyodwa futhi lonke likhulume ngezinye izilimi, bese kungena abantu abavamile noma abangewona amakholwa, ngeke yini bathi niyahlanya? 24 Kodwa uma nonke niprofetha bese kungena umuntu ongelona ikholwa noma umuntu ovamile, uyosolwa futhi ahlolisiswe yibo bonke. 25 Izinto ezifihlekile ezisenhliziyweni yakhe zibe sezibonakala, kangangokuba uyowa ngobuso akhonze uNkulunkulu, athi: “Ngempela uNkulunkulu uphakathi kwenu.” + 26 Khona-ke, yini okumelwe yenziwe bazalwane? Lapho nihlangana ndawonye, omunye unehubo, omunye unemfundiso, omunye unesambulo, omunye unolunye ulimi, omunye unencazelo. + Zonke izinto mazenzeke ngenjongo yokwakha. 27 Uma omunye ekhuluma ngolunye ulimi, makube ababili noma abathathu kuphela, nabo badedelane, omunye atolike. *+ 28 Kodwa uma engekho utolika,* kumelwe athule ebandleni, azikhulumele yedwa futhi akhulume noNkulunkulu. 29 Makukhulume abaprofethi + ababili noma abathathu, abanye bathole incazelo. 30 Kodwa uma omunye ethola isambulo ngesikhathi ehlezi lapho, isikhulumi sokuqala masithule. 31 Ngoba nonke ningakwazi ukuprofetha, umuntu oyedwa ngesikhathi, ukuze bonke bafunde futhi bakhuthazwe. + 32 Iziphiwo zomoya zabaprofethi kumelwe zilawulwe abaprofethi. 33 Ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu wokuthula akayena owesiyaluyalu. + Njengakuwo wonke amabandla abangcwele, 34 abesifazane mabathule emabandleni, ngoba akuvunyelwe ukuba bakhulume. + Kunalokho mabazithobe, + njengoba nje noMthetho usho. 35 Uma befuna ukufunda okuthile, mababuze abayeni babo emakhaya, ngoba kuyihlazo ngowesifazane ukuba akhulume ebandleni. 36 Ingabe izwi likaNkulunkulu laphuma kini, noma ingabe lafinyelela kini kuphela? 37 Uma umuntu ecabanga ukuthi ungumprofethi noma ukuthi unesiphiwo somoya, kumelwe avume ukuthi izinto enginilobela zona ziwumyalo weNkosi. 38 Kodwa uma umuntu engakunaki lokhu, naye ngeke anakwe.* 39 Ngakho bazalwane, qhubekani nilwela ukuprofetha, + kodwa ningakwenqabeli ukukhuluma ngezinye izilimi. + 40 Kodwa zonke izinto mazenzeke ngendlela efanele nangokuhleleka. *+
^ Noma, “ehumusha.”
^ Noma, “ahumushe.”
^ Noma, “ngifundise abanye ngomlomo.”
^ Noma, “umhumushi.”
^ Noma kungaba, “uma umuntu engenalwazi, uyoqhubeka engenalwazi.”
^ Noma, “nangendlela ehlelekile.”